किन सर्यो एमाले माओवादी पार्टी एकताको मिति ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
किन सर्यो एमाले माओवादी पार्टी एकताको मिति ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने भएका छन् । पार्टी एकताको विषयलाई लिएर अनेकन टिप्पणी भएपछि दुई पार्टीले एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको र हाल चुनावी अभियानमा दुवै दलका शीर्ष नेता केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले चुनाव पछि नै सबै प्रक्रियालाई एकमुष्ट टुंगो लगाइने बताएका हुन् ।
एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका विषयमा कुनै पनि असहमति नभएपनि समयचापका कारण निर्वाचन पछि नै उपयुक्त हुने बताए ।
पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर नेता तथा कार्यकर्ता भ्रमित हुनु जरुरी नभएकोमा जोड दिँदै प्रवक्ता भुसालले भने, “अरु कुनै कारणले होइन, हाल निर्वाचन अभियान नै प्रमुख कार्यभार हो । यो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि एकता प्रक्रियाले गति लिन्छ ।”
कम्युनिष्ट शक्ति मिल्न सक्दैन र मिलेपनि एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् र आगामी मंसिर १० गतेपछि सो प्रक्रियाले गति लिदैन भन्ने ध्येयका साथ गलत प्रचार भएकोमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेता सहमत छन् । आजै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एकता प्रक्रियाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक मनोहरि तिमिल्सनाकाअनुसार समयचापका कारण निर्वाचन पछि एकता प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने सहमति भएको र सोही आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यही कात्तिक २९ गतेदेखि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने हिमाली जिल्लाका विभिन्न आमसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन ।
कार्यक्रमअनुसार कात्तिक २९ गते गोरखाको घैरुङमा दुवै शीर्षनेताको उपस्थितिमा आमसभा राखिएको छ । यस्तै, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, लम्जुङ, स्याङजामा समेत दुवै शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
PreviousUML Vice Chair Gautam commits to resuming Murtiya border point
Nextइराक र इरानको सीमामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तिमा सयको मृत्यु